Maxaa dagaalyahankan Soomaaliga ah loogu sharfay Talyaaniga? | Gaaroodi News
Taxanaheennii warqadaha aynu ka helno weriyayaasha Afrikaanka ah ayaa Ismaaciil Caynaanshe waxa uu ku eegayaa sida ay qaar ka mida Talyaanigu ay u qiimaynayaan gumaysigoodii hore ee Afrika.
Maamulka degmada ee Magaalada Roma ayaa horraantii bishan ugu magac daray xarun istaan ama boosteejo u ah tareen oo laga dhisayo magaalada caasimadda Talyaaniga, sii loogu sharfo Giorgio Marincol, oo ahaa Talyaani-Soomaali ah oo qayb ka ahaa xoogaggii Talyaaniga.
Waxaa la dilay markii uu jiray 21 sano isagoo ka saaraya ciidamada Naziga oo rasaas ku furey bar koontarool 4tii Meey 1945, laba maalmood kadib markii Jarmalku si rasmi ah u hareereeyey Talyaaniga dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Istaankan, oo hadda dhismihiisu socdo, ayaa lagu magacaabi jiray Amba Aradam-Ipponio – oo loo tixraacayo olole Talyaani ah oo ka dhacay Itoobiya sanadkii 1936 markii ay xoogagga fallaagada ahi si naxariis darro ah u sii daayeen hub dhanka kiimikada ah, isla markaana ay ka geysteen dambiyo dagaal, dagaalkii caanka ahaa ee Amba Aradam.
Sawirro dagaalkii Amba Aradam 1 March 1936
Dadka u ololeynayey ayaa ugu horreyn boodh dul dhigay xaruntan tareenka iyagoo sheegayey in aan goob noocan ah lagu magacaabi karin “dulmi” isla markaana ay ku riixayaan in looga magac daro Marincola, si loo xasuusto noloshiisii cajiibka ahayd.
XIGASHADA SAWIRKA,RAZZA PARTIGIANA/FAMILY ARCHIVE
Qoraalka sawirka,Giorgio Marincola oo bidix xiga iyo hooyadii
Waxaa loo yaqaanaa “partigiano neroor” ama “halgamaagii madoobaa” wuxuuna xubin firfircoon ka ahaa iska caabintaas.
Qoraalka sawirka,Giuseppe Marincola (bidix) waxa uu sawir kula laba soomaali ah oo kale
Qoraalka sawirka,Taallada Indro Montanelli, kaas oo difaac u ahaa gumeysiga.
Waxaa iyana hore uga dhacday magaalada Milano markii ay socdeen banaanbaxyadii Black Lives Matter, taalada saxafiga muranka dhaliyay ee Indro Montanelli, kaasoo difaacay gumeystihii isla markaana qirtay inuu guursado gabar 12 sano jir ah oo reer Ereteriya ah xilligii ay ciidamadu wadeen sannadihii 1930naadkii, in lagu shaanbadeeyey ‘kufsade iyo cunsuri’.
Waxaa qaabeeyey 30 sano oo colaado ah, xusuusta xilliyadii gumeysiga ayaa dhamaanteed la lumiyey – marka laga reebo jikada ay oo ay taal cunnada ay ka kooban tahay “suugo suqaar” – Maraqa lagu daro baastada.